Taariikhda daawada ka-hortagga welwelka: laga soo bilaabo barbitures ilaa xasilloonida caanka ah
Soo gal / Saxiix
Ku iibso qayb ahaan
Kala-bax la'aan Erectile
Jooji sigaar cabidda
Taariikhda daawada walwalka
April 7, 2021 2021-04-07 4:45
Isticmaalka daawada walwalka waa habka ugu caamsan ee lagu daaweeyo jahwareerka guud ee walwalka. Dadka badankood aad ayey u yaqaanaan “Valium","Xanax”Iyo kuwa kale. Wax ka qabadka kale ee walwalka waxaa ka mid ah biofeedback iyo tababar nasasho. Shakhsiyaadka ayaa sidoo kale baran kara sida si ikhtiyaari ah loo xakameeyo weerarada argagaxa iyo geeddi-socodka bayoolojiga ee gacan ka geysan kara dhibaatooyinka welwelka leh. Taariikhda dawada walwalka ee ladagaalanka daaweynta xanuunka guud ee walwalka waxay bilaabatay dhowr iyo toban sano kahor.
Taariikhda daaweynta ka hortagga walwalka waxay ka bilaabatay isticmaalka barbiturates. Kuwani waxaa loo yaqaanaa ugu horreyn daaweynta dabiiciga ah ee dhammaan dhibaatooyinka walwalka ee 1950's. Daawooyinkan mararka qaarkood waxaa loo yaqaan dawooyinka daweynta-ku-dejinta. Waxaa loo isticmaalaa qadar yar si loo caawiyo loona dejiyo dadka inta lagu jiro weerarada argagaxa. Bukaannada sida joogtada ah u qaata dawooyinka ka hortagga walwalka waxaa dhici karta inay hurdo ku dhacaan. Barbiturates waxaa lagu yaqaanaa inay sababaan waxyeelo daran, gaar ahaan qiyaaso badan. Ugu dambeyntiina, waxay u horseedi doontaa inay si buuxda ugu tiirsanaadaan daroogooyinkaas.
Dib ugu noqoshada 1940-yadii, Frank Berger oo loo yaqaanay farmasiga wuxuu isku dayay inuu sameeyo daawo antibiyootiko wax ku ool ah. Wuxuu soo saaray meprobamate kaa caawin kara yareynta walaaca iyo nasashada murqaha. Kaliya waxay ahayd sannadihii 1950-meeyadii markii daawada suuxdinta la sii daayay - oo loo yaqaan 'hypnotic medicine' iyadoo loo marayo magaca sumadda Milltown. Daawadan cusub ee ka hortagga walwalka ayaa weli saameyn ku yeelatay lulmo weyn. Si kastaba ha noqotee, waxay ahayd mid aad u yar oo balwad leh kana khatar yar barbiturates.
Taariikhda daaweynta kahortaga walwalka waxay socotey illaa 1950-meeyadii. Goor dambe ka dib, Lowell Randall wuxuu helay chlordiazepoxide. Tan waxaa loo tixgeliyey inuu xubin ka yahay qoyska daroogada loo yaqaan benzodiazepines. Waxay u adeegtay sidii xasilloonida xayawaanka iyada oo aan laga daalin. Daawadan ayaa la ogaaday 1930-yadii. Waxaa loo yaqaanay in yar oo aan waxtar lahayn wakhtigaas. Waxaa loo suuq geeyay sidii daawo hypnotic ah oo hoos timaada Librium kadib markii la ogaaday.
Mar dambe, daawo kale ayaa lagu soo saaray magaca Valium. Bukaannada badankood iyo dhakhaatiirtu waxay u tixgeliyeen dawooyinkan ka hortagga walwalka inay yihiin kuwo ammaan ah gaar ahaan kuwa loo yaqaan 'hypnotics'. Aakhirkii waxay noqdeen dawooyinka ugu badan ee loo qoro Maraykanka!
Daawooyinka sida Valium waa natiijada tobanaan sano oo cilmi baaris ah iyo helitaan taasoo horseedaysa faham wanaagsan oo ku saabsan dhibaatada aan hadda u naqaanno walaac ahaan. Bal qiyaas adduun aan lahayn mid ka mid ah daroogooyinkaas ka hortagga walwalka, way ku adkaan lahayd dadka ay dhibaatadu saameysey inay ku noolaadaan nolol caadi ah!
Daawooyinka dabiiciga ah ee hurdo la'aanta
Fikirkaaga halkan ku dhaaf Cancel reply
Daaweynta Daaweynta hurdo la'aanta - Halista ma ka badan tahay faa'iidooyinka?
Waxaa laga yaabaa 01, 2021
Calaamadaha caanka ah
sida loo daaweeyo hurdo la’aanta hurdo la’aanta daawo hurdo la’aanta ayaa daaweysa
Dooro category a Finanka (1) ADHD (2) Walaaca (4) Niyad jab (6) ED (2) Caabuq (5) Hurdo la'aan (4) Xanuun (5) PE (1) STD (2) Sigaar jooji (2) Miisaanka oo yaraada (2)
Fadlan dooroGuud ahaanAdipexAmbiAmoxilAtivanAugmentinCealadChampixCialisConcertaCymbaltaImovaneKlonopinlunestaMinocinModalertNaprosynPregabalinPriligyProvigilQutanRemeronRitalinRivotrilRoaccutaneRobaxinSeroquelSomaSonataStratteraTemestaUltramValiumViagraVibramycinXanaxXikmaddaZithromaxZoloftZoviraxZyban
kharashka accutane dib u eegista accutane accutane waxyeelo adipex 37.5 dib u eegista adipex armodafinil vs modafinil sidee u shaqeeyaa 'accutane' isotretinoin waxyeelo isotretinoin modafinil vs adderall phentermine 15mg phentermine 37.5 mg kaniiniyada 'phentermine' dib u eegista phentermine ritalin 10 mg ritalin 18 mg ritalin 25 mg ritalin 40 mg ritalin 60 mg
Posts Blogskii ugu dambeeyay
Waxaa laga yaabaa 1, 2021
Su'aalaha la Iibsado
Saxeex u Noqo Wargeyskeena
U dhaaf e-maylkaaga si aad u hesho dhammaan heshiisyada kulul & wararka aad waxtar badan u leedahay!
Saxiix wargeyskeena si aad u hesho warar joogto ah iyo inbadan.
© 2020 Farmashiyaha RXS. Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay
Xulo beeraha lagu tusayo. Kuwa kale waa la qarin doonaa. Jiid oo hoos u dhig si aad dib ugu habayso amarka.
Meelo gaar ah
Fur bogga liiska xulashada Continue shopping